Zimbabwe: Saraakiil Militari ah oo Xukuumadda cusub qayb ka noqonaya – Kasmo Newspaper
Zimbabwe: Saraakiil Militari ah oo Xukuumadda cusub qayb ka noqonaya
Updated - December 1, 2017 3:20 pm GMT
London (Kasmo), Madaxweynaha cusub ee Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa ayaa 30kii Nofember magacaabay Golihiisa wasiirrada isaga oo Saraakiil sare oo Militariga ah u dhiibay jagooyinkii muhiimka ahaa.
S/Gaas Sibusiso Moyo waxaa loo magacaabay Wasiirka Arrimaha Dibadda, halka Talyihii Ciidanka Cirka, Air Marshal Perence Shiri, oo ay ilma adeer yihiin Mugabe, loo magacaabay Wasiirka Beeraha, Dhulka iyo reer Guuraaga.
Kooxaha mucaaradka ayaa ka niyad jabsan wixii ay ka filayeen in uu noqdo Kacaan wax ka baddela siyaasadda dalka, waxayna ku dhaleeceeyeen xukuumadda cusub in ay tahay khiyaano laga galay dadweynihii u dabbaaldagay istiqaaladdii Mugabe.
Xubnaha ugu muuqa dheer Xukuumadda Mnangagwa waxaa ka mid ah Patrick Chinamase, wasiirka Maaliyadda oo horey ula soo shaqeeyay Madaxweynihii hore Robert Mugabe.
Mucaaradka ayaa u haysta in xulka Mnangagwa sameeyay markhaati ka yahay sida awoodda siyaasadeed ee dalka wali ugu jirto gacanta ciidammada.
Emmerson Mnangagwa oo 75 jir ah, horeyna u ahaa Madaxweyne ku-xigeenkii Mugabe, waxaa xilka rasmi ahaan loogu dhaariyay 24kii Nofember 2017, ka dib markii Ciidanku taladii la wareegeen.
Iska horimaadka 93 jirkii Robert Mugabe iyo qayb ka mid ah xisbigiisa ZANU-PF qudhiisa wuxuu ka dhashay muranka cidda jagada ka dhaxli doonta oo ay isku haysteen xaaskiisa Grace Mugabe iyo Emmerson Mnangagwa.